Sida looga soo saaro kaydinta WhatsApp ee Google Drive qunsulka | Laga soo bilaabo Linux
WhatsApp Ma ahan warqad lacag la'aan ah, laakiin nasiib daro waa tan Nidaamka ugu badan ee adduunka laga isticmaalo ee farriimaha la adeegsado, mid ka mid ah shaqadeeda ayaa ah inuu awood u yeesho inuu kaydiyo dhammaan faylalkayaga iyo wadahadalkeena Google Drive, kaas oo lagu soo celin karo arjiga markii la doono. In kastoo wixii lagu daray, waxay kaloo na siineysaa suurtagalnimada helitaanka kaalmadan, markan waxaan rabnaa inaan ku tusno sida looga soo saaro kaydinta WhatsApp ilaa Google Drive qalabka isticmaalka Soo -saare Google Drive -ka WhatsApp.
1 Waa maxay WhatsApp Google Drive Extractor?
2 Sidee loo rakibaa WhatsApp Google Drive Extractor?
3 Sidee u isticmaashaa Soosaaraha Google Drive Extractor?
Waa maxay WhatsApp Google Drive Extractor?
Waa qoraal ah il furan, Lagu Sameeyay python by kooxda EliteAndroidApps, saamaxaya kuwa isticmaala WhatsApp on Android awooda xogta ka soo saar kaydkaaga WhatsApp ee lagu martigaliyo Google Drive.
Nidaamkani waa mid wax ku ool ah, waxaan ka sameyn karnaa konsoleerkeena iyo qaybinta GNU / LInux. Waa in la ogaadaa in qoraalkani noo ogolaanayo inaan liis garaynno keydkeena iyo macluumaadka laga dhex helay, si la mid ah, waxay isku waafajineysaa keydka aan ka dooneyno kumbuyuutarkeena sidoo kale waxay leedahay suurtagalnimada inaan ku shubno keyd aan ku haysanno daruurteenna mar dambe lagu soo celin casriga ah.
Soo -saare Google Drive -ka WhatsApp
Sidee loo rakibaa WhatsApp Google Drive Extractor?
Si loo rakibo Soo -saare Google Drive -ka WhatsApp Waa inaanu lahaano Python iyo configparser, tan awgeed waa inaan ku fulinnaa amarka soo socda Deros-based distros ee konsoleheena:
Markaan dhammaystirno ku tiirsanaanta lagama maarmaanka ah, waa inaan raacnaa nidaamka soo socda:
Clone Keydka rasmiga ah ee Soo -saaraha Google Google Drive:
Wax ka beddel aqoonsiga isku xirka "settings.cfg":
Waxaan bedelnaa google username iyo password.
Waxaan xaqiijiyey in username-ka iyo erayga sirta ah aan loo dirin wax server ah, laakiin waxaan u maleynayaa inaysan ahayn sida ugu aaminka badan ee loo galo qoraalka, marka waa muhiim in loo adeegsado qatarteena.
Orod WhatsAppGDEextract.py laga helo qalabka:
Sidee u isticmaashaa Soosaaraha Google Drive Extractor?
Mar alla markii aan u qaabeyno WhatsApp Google Drive Extractor si aan ugu xirno koontadayada wadista google, waa inaan ku fulinno mid ka mid ah amarrada soo socda:
Si loo arko caawinta qoraalka:
Si aad u aragto nooca iyo qoraalka:
Si aad u aragto qaabka wadista google:
Liistada faylasha la heli karo si loo waafajiyo:
Si aad ugala soo baxdo dhammaan faylasha kombuyuutarkaaga:
Si aad u soo dejiso nuqul gaar ah:
Qoraalkan cajiibka ah wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku helno keydkeena WhatsApp ee Google Drive isticmaalkiisuna wuu badnaan karaa, tusaale ahaan, inaan leenahay hawl noo ogolaaneysa inaan sawiradayada ku keydinno WhatsApp rasmiga ah ee shirkadeena.
Maxaadse ku siinaysaa qoraalkan? Nooga tag faalladaada ku saabsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Sida looga saaro kaydinta WhatsApp ilaa Google Drive qalabka
Ku jawaab felipe cabada
Waxaan ku helay qaladkan - "Lama awoodin helitaanka khariidada faylka ee google: com.whatsapp"
Ku jawaab Max
Waad salaaman tahay, waxaan helay qaladkan, ma jiraa qof og waxa aad u jeedo?
Raad-raac (wicitaankii ugu dambeeyay ee ugu dambeeyay):
Faylka "WhatsAppGDExtract.py", sadarka 7, gudaha
codsiyada soo dejinta
ImportError: Ma jiro cutub la magacaabay oo codsiyo ah
Aad baad u mahadsantahay,
Sideed ku xalisay ???
Si loo xalliyo waa inay ku rakibaan qaabeeyaha iyo codsiyada modules.
Waxay ku sameeyaan rakibayaasha dhuumaha, waa inay sidoo kale rakibaan
Nabadeey Ray, hadii aysan aheyn dhibaato aad u badan, fadlan ma ii sheegi laheyd sida loo rakibo modulada configparser iyo rqeuest? Waad ku mahadsantahay horay. Farxad
Ku soo jawaab Walter
Haye antonz dijo
Dhibaato ayaan ku qabay dib u soo celinta keydka markii aan dib u cusbooneysiiyay WhatsApp, ma garanayo sababta kaliya "cirfiidyada" sawirradayda oo dhan la isugu dubbariday, oo leh 0kb, waan walwalsanaa maxaa yeelay waxaan u haystay in wax walba iga luntay laakiin waxaan isticmaalay qaabkan waana ku guuleystay dib u hel wax kasta oo aan u baahday, mahadsanid nin
Ku jawaab HeyAntonz
Waxaan helayaa qalad = xunAutentication
Ku jawaab Xavis
Weli qaladkaas waan helayaa mana awoodin inaan xalliyo
Waxaan sidoo kale helayaa qalad isku mid ah
Dabcan waan sameeyaa, nacasnimadaydii waalan ee hore ayaa u isticmaashay inay ku xado macluumaadkeyga WhatsApp oo ay igu weydo fb-kayga
Ku jawaab Nanny
Ma ogeyd lambarkaaga sirta ah ee Google?
markaan ordo feylka Wha… .r.py waxaa igu dhaca qaladka soo socda:
ImportError: Ma jiro cutub loogu magac daray configparser
sida aan uga gudbo. Aad baad u mahadsantahay!
Ku rakib moduleka configparser maamulaha PIP
Hubsaday .. hadii ay shaqeyso, dhibaatada aqoonsiga xumi waa waxyaabaha soo socda waxaad dib ugu laabaneysaa dejinta tusaale ahaan waxaad ka saareysaa g oo waxaad ku celineysaa meeshiisii ​​oo aad keydineysaa feylka markalena waad amreysaa amarka kadibna wuu socdaa si wax walba hoos ugu dhacaan ... waa wax xiiso leh ... waad ku mahadsan tahay wax ku biirinta !!!
Ku jawaab oliira
Halka aan ka helo G
Taasi waa su'aasha ah, G intee le'eg tahay inuu soo saaro, ka saaro gmailka, isbeddelka iyo galitaanka, laakiin macno badan ma samaynayso mana shaqeyneyso, waan sii wadaa
Ku jawaab ferduz
Saaxiib si faahfaahsan u sharax, anigu mar hore ayaan badalay G laakiin qaladka wuu sii wadaa.
Jawaab malahan tan? Waxaan helay qalad isku mid ah "BadAuthentication"
Jawaab ku bixi Panfilo
Waxay u shaqeysay sifiican, laakiin ma aanan awoodin inaan shaqeeyo maalmo.
Waxaa laga yaabaa in WhatsApp ama Google ay isbedel ku sameeyeen barnaamijkooda oo kani ma shaqeeyo.
Waxaa laga yaabaa in qoraaga arjiga uu sii daayay v.2 laakiin wax aad u yar ayaa laga ogyahay oo ku saabsan. TripCode!
Jawaab si aad u xaqiijiso
Waan awooday inaan ka dhigo mar kale inay shaqeyso, 🙂
sidee u sameysay?
sidee u sameysay
Ku jawaab linux
Ii qor: generacionmusical@gmail.com oo waxaan idinla wadaagayaa xirmada cusub .py + Pyportify oo horeyba gebi ahaanba loogu hagaajiyay hawlgalkeeda.
Saaxiib diyaar ah !!! Waxaan horey kuugu soo diray email roquines@hotmail.com
Kani waa emaylkeyga, fadlan ii soo dir macluumaadkan .py + Pyportify Package oo horeyba gebi ahaanba loogu hagaajiyay hawlgalkiisa. dhelg2025@gmail.com
Ku jawaab dhelg2025
Waad salaaman tihiin, subax wanaagsan, waad salaaman tihiin. Hadaad adiguna i caawin kartid Aad baan u mahadcelin lahaa.
Ku jawaab Memo
Waxaan sidoo kale u baahanahay hab aan ku shaqeeyo, si nogaia@hotmail.com
Waxaan qabaa su'aal, oo ku saabsan nidaamka qalliinka, maaddaama hawshan la qaban karo oo keliya, maxaa yeelay waxaan ahay mid cusub oo waxay iigu yeeraysaa dareenkeyga, si aan u baadho, mahadsanid
Ku jawaab juan sanchez
Ma jiraa qof shaqo ka dhigay? Weli waxaan helayaa aqoonsi xumo ...
Waa inaad la gasho Ghrome isticmaalaha aad rabto inaad ka saarto macluumaadka
Gacaliye, nidaamkani miyuu faa'iido u yeelan doonaa in laga soo saaro keydka ka soo baxa Drive oo loo soo raro iCloud oo markaa uu awood u yeesho inuu soo celiyo sheekada ka socota Android ilaa iPhone?
Jawaab Jorge Ibarra
Waxaan raadinayaa jawaab isku mid ah, ma heshay wadadii aad ku samayn lahayd?
Iima shaqeyso aniga, wuu soo baxayaa ...
Waxaan hayaa Linux Mint 18.2 Sonya
Soo dejiso codsiga Google Python oo rakibo, iskuday markale !!!
Waad salaaman tahay sideese loogu samayn lahaa mac? Fadlan caawi.
Raali noqo jaahilnimada laakiin miyaad ka soo kaban kartaa feylashaan aan martigaliyay wax ka badan 2 sano ka hor koontadayda google-ka anigoon haysan lambarka wakhtigaas? I caawi
Kawaran hadaad haysato wax kabadan hal WhatsApp oo kayd ah oo nambarada mobilada kaladuwan ee isla xisaabta gmail?
Waxaan dhibaato ku qabaa caawimaadda caawimaadda !!!!
Caawinta Argagixinta: Ma jiro module Pyportify.gpsoauth
Halkan xalka BadAuthentication (jawaabta «alvaro354 faallo 26 Jul»)
Ku jawaab Yehudy
Salaan kadib, sidoo kale waxaan dhibaato ku qabaa Pyportify, waxay ii sheegaysaa in moduleka uusan jirin, Caawinaad.
Ku jawaab Rolando Maldonado
Aad ayaan ugu mahadnaqayaa qofkasta oo i taageera, way ogyihiin hadii wax cusbooneysiin jiro sababta ay mar hore URL iigu soo direen oo ay iigu sheegaan dhamaadka inay tahay inaan si toos ah ugala soo baxo webka mana ii oggolaan doono inaan ka soo dejiyo qunsuliyada, vdd waxaan haystaa 30 maalmood ka hor inay tirtiraan WhatsApp-kayga waxaanan ka baqayaa inay tirtiraan dhammaan shaqadaydii aan ku taageeray halkaas iyo wixii ka sarreeya oo dhan waxay igu boorrinaysaa inaan ka soo kabsado, mahadsanid hore
Jawaab Bryant rodriguez
Saaxiib diyaar ah, horey ayaan kuugu soo diray email…. Waxaan sugayaa jawaabtaada degdega ah aadna waad ugu mahadsantahay emailkeyga beir_123@hotmail.com
Waad salaaman tahay waxaan u baahanahay caawimaad, waxay i siisaa qaladka soo socda:
ma furi karo feylka 'WhatsAppGDExtract.py': [Errno 2] Ma jiro feyl ama buugga noocaas ah
qof ayaa iga caawin kara inaan sameeyo? Ma aqaan sida, oo waxaan si deg deg ah ugu baahanahay inaan ka soo kabto keydkayga.
Immisa qof ayaa igu soo dallacaya si aan u sameeyo?
Si gaar ah ii qor: a xaqiijinmailspam@gmail.com
Waad salaaman tahay, waxaan helayaa qalad = BadAuthentication, qof ayaa i caawiya fadlan
Ku jawaab Carlos G
Salaan kadib, waxaa jiri doona xoogaa qaab ah oo lagu soo dejisto keydka aaladda oo waliba ku keydsan google drive. Tusaale ahaan, kiiskeyga kayd ayaa la keydiyaa oo oranaya: Samsung xxx computer backup. Mahadsanid
Qof ayaa i caawiya fadlan, sifiican uma aqaan sida loo sameeyo, waxaan horeyba u soo degsaday nuuca ugu dambeeyay ee Ubuntu oo ii sheeg talaabada labaad
Amarka 'git' lama helin, laakiin waxaa lagu rakibi karaa:
Ku jawaab Juliannn
Wanaagsan yaa ii gudbin kara nooca ugu dambeeya ee WhatsAppGDExtract.py maadaama ay i siineyso qalad:
Faylka "WhatsAppGDExtract.py", khadka 42
furan (maxalli ah, 'wb') hanti ahaan:
Maxaan sameeyaa oo iga maqanyahay ama maxaan qalad ku sameeyaa?
Python 2.4.3 (# 1, Jan 9 2013, 01:38:41)
Nooca "caawimaad", "xuquuqda daabacaadda", "dhibco" ama "shati" wixii macluumaad dheeraad ah.
Ku jawaab aordonez
i caawi aniga waxaan helayaa qalad isku mid ah roymer1975@gmail.com
Ku jawaab Roymer
Salaan diiran, miyaan ka shaqeyn karaa lambarka Wownsalka Windown mise waa inaan ku sameeyaa kombuyuutar leh LINUX oo ah nidaamka hawlgalka?
Ku jawaab Cesar Moreno